Ciidamada Sudan oo keenay marmarsiinyo cajiib ah oo ku saabsan sababta afgembiga (Duullimaadyada oo la hakiyey & goorta la furayo) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Ciidamada Sudan oo keenay marmarsiinyo cajiib ah oo ku saabsan sababta afgembiga...
(Khartuum) 26 Okt 2021 – Ciidamada Xoogga Sudan ayaa difaacay inqilaabka ay awoodda kula wareegeen, iyagoo ku marmarsooday inay sidaa u yeeleen si ay dalka uga baajiyaan dagaallo sokeeye, sida uu sheegay Jen. Abdel Fattah al-Burhan..
Yeelkeede, waxaa jidadka dalkaasi Sudan kusoo noqday dibedbaxyadii iyadoo ay dadka madaniga ihi diiddan yihiin afgembigan, halka ay Maraykanka, EU, QM iyo dalal kale ku baaqeen in lasii daayo RW dalkaasi iyo madax kale oo la geliyey xabsi guri.
Dhanka kale, hay’adda duullimaadyada rayidka ah ee Sudan ayaa ku dhawaaqday in la hakiyey duullimaadyadii iman lahaa gegada Khartoum international Airport oo idil tan iyo Sabtiga oo ay bisha Oktoobar 30 tahay.
Waxay sheegeen in tillaabadaa loo qaaday xaaladda cusub ee dalkaa darteed, balse Ibrahim Adlan ayaa Reuters u sheegay inay weli furan tahay hawada Sudan oo ay dul mari karaan dayuuradaha caalamiga ah.
Si kastaba, waxaa jidadka dalkaasi ka soconaya dibedbaxyo rabshado wata halka ay ciidamadu cunfi kala hortegayaan, iyadoo magaalooyin badan la geliyey xaalad deg deg ah iyo bandow.
Previous articleLaacib Talyaani ah oo uu awoowe u yahay Fajiistihii Talyaaniga oo kasoo muuqday koox ka ciyaarta Serie A
Next articleTOOS u daawo: AC Milan vs Torino, Chelsea vs Southampton, Arsenal vs Leeds United – LIVE (Shaxda Sugan)